Ny Semalt dia manolotra ireo karazana lehibe amin'ny filaharan'ny Google Analytics
Ny filaharan'ny Google Analytics dia fomba tena tsara hanovana sy hanovàna ny angona ao amin'ny pejin'ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao. Azo ampiasaina hampidirana sy hisintonana ny fampahalalam-baovao izy ireo, ary hanova ny tena fiovana amin'ny fomba hijerena ireo angona ireo amin'ny tatitra Google Analytics. Ankoatra izany, manampy antsika hanova ny fampahalalam-baovao ireo sivana mba hahafahana manova ny endrika manginy amin'ny endrika mifangaro ary ny fanantenana ny mpampiasa. Vokatr'izany, mahazo tombontsoa maro ianao hampitombo ny orinasanao amin'ny aterineto, ary ny Google Analytics dia afaka mampihatra ny filtre avy amin'ny pejy iray amin'ny pejy iray amin'ny hafa mba hahafahan'ny soso-kevitr'ilay tranonkala ho very. Raha vao voatsabo tanteraka ny angona dia azonao atao ny mahita ny valiny farany amin'ny tatitra UI amin'ny kaonty Google Analytics anao.
I Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Successor, dia mamaritra etsy ambany ny karazan-javatra lehibe amin'ny Google Analytics:
Ny sokajy voalohany dia sivana spambot. Izy io no endrika tena mahavariana sy mahatalanjona, ary mora ny manamarina ny pejy View Settings. Ho an'ity, tokony hitsidika ny fizarana admin ianao ary hikaroka ny safidy Bot Filter. Kitiho ity safidy ity ary mamorona filtre amin'ny adiresy IP mampiahiahy. Ataovy azo antoka fa manafaka ireo spiders sy bots ampiasaina amin'ity safidy ity ianao ary jereo ny boaty Activate alohan'ny hamafana ny varavarankely. Ny filalaovana spambot dia manampy anao hisoroka botsika sy sponjy ary hiantoka ny kalitaon'ny tranokala amin'ny tranokala .
Mialà amin'ny atin'ny aterineto
Ny safidy iray hafa dia tokony esorinao ny adiresy anatiny sy ny adiresy IP rehetra izay mampiahiahy anao. Azo atao amin'ny kaontinao Google Analytics ianao. Safidinao ny safidinao ary azonao atao ny mijery ny endri-tsoratra filalaovana.
Voalohany, tsy maintsy manapa-kevitra ianao raha te hanangana filtre vaovao na te hampihatra ireo filtre teo aloha teo amin'ny tranokalanao. Raha vantany vao nanapa-kevitra ianao, ny safidy manaraka dia ny hanana sanda filokana marobe ary hampihatra azy ireo amin'ny pejy maro araka izay azo atao. Tsindrio ny safidy mifidy rehefa noforonina ny sivana ary izao no fotoana hampiharana izany amin'ny tranokalanao. Mandritra izany fotoana izany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fahasamihafana eo amin'ny filtre sy ny mombamomba azy manokana. Ho an'ny fanananao dia tianay lazaina fa ireo filaharana voafetra dia ny karazana template izay azonao ampiasaina hamoronana filters automatique. Etsy andaniny, ny solosaina ampiasaina dia ahafahanao manamboatra sy manova ny fanalahidin'ny sivana alohan'ny hidirana azy ireo.
Amboary ny URL tsirairay mba hampidinana kely
Dingana iray manan-danja ary tsy tokony hohadinoina amin'ny laoniny. Tokony hanery ny URL avy amin'ny lehibe ianao mba hampihenana sy hampifanaraka ny fijeriny araka ny fitsipika sy fitsipika momba ny Google Analytics. Raha manana pejy maro miaraka amin'ny URL hafa ianao, dia tsy maintsy manova azy ireo ho any ambany kokoa araka izay azo atao. Aza avela ho hita ao amin'ny karoka fikarohana izy ireo mandra-pahatongany na raha tsy efa nampihemotra azy ireo ianao.
Rehefa nampifanitsy ireo fanovana voalaza etsy ambony ianao ary nampihatra ny sivana araka ny tokony ho izy dia hanomboka hanatsara ny kalitaon'ny tranonkalan'ny tranokalanao. Ny sivana dia tokony ampidirina ao amin'ilay tranonkala raha tsy misy adiresy IP na adihevitra tsy fantatra anarana. Raha tsy izany dia tsy ilaina ny fanantonana ity sivana ity Source .